Zuru ezu ™: Azụmahịa-Cross-Border site na Ntugharị, Shozụ ahịa, site na Mmezu | Martech Zone
Tony Bianco si achọpụtala atụmatụ dị iche iche na Australia maka ihe karịrị afọ iri anọ, ugbu a, ụdị a abanyela n'ime akwụkwọ akụkọ ejiji kachasị emetụta n'ụwa na ndepụta ndị eji ejiji kachasị mma site na ụdị ndị Australia. Taa, a pụrụ ịhụ ọtụtụ ndị ewu ewu na ụdị dị elu na US na Europe dum na-eyi ọtụtụ akpụkpọ ụkwụ Tony Bianco na ngwa.
Iji nyere aka mee ngwangwa mgbasawanye mba ha na ọchịchọ gafere ókèala, Tony Bianco na Pitney Bowes na-arụ ọrụ iji nye ndị ahịa gburugburu ụwa enweghị ahịa zuru oke, ahụmịhe ịzụ ahịa n'ịntanetị. Pitney Bowes zuru ezu solution ngwọta Cross-Border.
Ugbu a Tony Bianco nwere ike iru akpụkpọ ụkwụ hụrụ gburugburu ụwa na-ekwe ka ha na-akwụ ụgwọ na mpaghara ego na n'ụzọ zuru ezu ala na-akwụ ụgwọ na-ekwe nkwa-ya mere ọ bụghị ihe ịtụnanya n'elu nnyefe. Ndị ahịa zuru ụwa ọnụ na-enweta akpụkpọ ụkwụ nke na-enyere ha aka ịpụ iche na akara ngosi mara mma nke Tony Bianco ka amara nke ọma na gburugburu ụwa.
Footkpụrụ ụkwụ zuru ụwa ọnụ dị anyị mkpa. Anyị nwere ina gafee ụwa na mkpa iji nweta anyị akpụkpọ ụkwụ na ngwa ka a iche iche otu nke ahịa. Site na isoro Pitney Bowes na-emekọrịta ihe, anyị nwere ike ịre ndị na-azụ ahịa na mba na mba 150 na mpaghara ha na teknụzụ njedebe ha na-enye ndị ahịa anyị ahụmịhe na-enweghị ntụpọ. Adam Bianco, Onye isi, Tony Bianco
Pitney Bowes 'cross-border solutions dị ka akụkụ nke Pitney Bowes Commerce .gwé ojii, onye nkwado azụmahịa, na-enye ohere inweta azịza, nchịkọta na APIs gafee azụmaahịa zuru ezu na-aga n'ihu na ọsọ na agility.
Ike Cross-Border zuru ezu gụnyere
Ngwaọrụ ọgbọ - Pitney Bows nwere ike inye ihe niile site na nyocha nke ndị ahịa na mkpọsa ahịa azụmaahịa, na-enye azụmahịa gị ohere ịbanye na nchekwa data ha na-abawanye nke ndị na-ere ahịa na-agafe oke ma na-esonye na mmemme ahịa ha nke na-eji ọwa obodo dị ka mmekọrịta mmadụ na ibe ya, ọchụchọ na mmekọrịta iji chụba ahịa ahịa na ngosipụta ika.
Nweta ebe nrụọrụ weebụ - Teknụzụ ikike nke Cross-Border na-achọpụta saịtị ụlọ gị na mba 220 maka njikarịcha ntụgharị ndị ahịa. A na-atụgharị asụsụ ntụgharị, ego na nkwado mba na ọnụahịa ngwaahịa. Enweghị mkpa ịkwụ ụgwọ maka mmụba iji wuo ma jigide saịtị nke mba ma ọ bụ tinye ego na akụrụngwa maka njikwa ngwaahịa.
Ọnụ Ahịa & Nkwado - Site na ịhọrọ Pitney Bowes ' A na-akwụ ụgwọ iji kwụọ ụgwọ Nhọrọ (DDP), ị ga-enye ndị ahịa gị ihe doro anya site na igosipụta ọrụ na ụtụ isi na-ekwe nkwa tupu ịlele na-enweghị ihe ịtụnanya COD na nnyefe. Pitney Bowes na-agbakọ ma na-agbakọ katalọgụ ngwaahịa gị, na-egbochi ebe ọdabara, ebe ị na-ejikwa ọrụ niile metụtara nnabata.
Nkwụ ụgwọ ụgwọ & ihe egwu Pitney Bowes na-enye nhọrọ nke nhọrọ ịkwụ ụgwọ zuru ụwa ọnụ na ahịa, ma na-eje ozi dị ka onye na-ebupụ ihe ndekọ na onye isi na mmasị. Na dị ka Onye ahia nke Record (MOR) ha na-ejikwa nhazi ịkwụ ụgwọ na njikwa aghụghọ, na-egbochi ndị ahịa ha ụgwọ ọjọọ na ụgwọ ụgwọ.
Njikwa lọjistik - Mgbe emechara ngwugwu gị maka nnyefe mba ofesi na otu n'ime ụlọ ọrụ Pitney Bowes, a na-enyefe ha ndị ọrụ kachasị mma na netwọkụ zuru ụwa ọnụ. Ha na - enyere aka iwepu nchegbu ndị ahịa na - eche banyere ihe mgbagwoju anya na ọnụ ahịa metụtara ya na nloghachi site na ijikwa na ịchọpụta ngwongwo alọghachiri na ọdụ ụgbọ mmiri dị mkpa gburugburu ụwa. Ha na-enyekwa ngwugwu ngwugwu ma nye ngwaọrụ maka nsuso ngwugwu dị mfe.
Nlekọta ndị ahịa - Nye ndị nnọchi anya ndị ahịa gị ka ha nye Pitney Bowes 'Consulate ngwá ọrụ dị elu, nkwado siri ike, ngwa ahịa websaịtị iji zaa ajụjụ metụtara usoro na nsuso ndị ahịa gị. Calllọ ọrụ oku ha na-akpọ 24/7 na-ekpuchi asụsụ 15 iji nyere nsogbu ndị siri ike aka mgbe ha bilitere.
Nkwado na-aga n'ihu - Ndị otu ndị ọrụ ntinye aka nke Pitney Bowes bụ ndị dị njikere inye nkwado ị chọrọ maka arụmọrụ azụmahịa, ịkọ akụkọ, nkwalite nkwalite, na nyocha, ajụjụ ndị ahịa, njikwa nlọghachi na ndị ọzọ. Site na ndepụta ndị ahịa na-eto eto nke ndị na-ere ahịa 300, Pitney Bowes nwere ahụmịhe na ahụmịhe ịchọrọ iji gaa nke ọma na ụwa.
Tags: Cloudgwé ojiiCompleteCross ókèchọrọ ọgbọazụmahịa zuru ụwa ọnụikpo okwu azụmahịa zuru ụwa ọnụọrụ ndị ahịa ụwaecommerce zuru ụwa ọnụmmezu zuru ụwa ọnụnchịkwa ụwaịkwụ ụgwọ zuru ụwa ọnụnkwado zuru ụwa ọnụnsụgharị zuru ụwa ọnụahia mba ofesimmezu mba ụwanchịkọta akụrụngwa mbaịkwụ ụgwọ mba ụwaahịa mba ụwaimekọ ihe ụwaakụkụnhazi oruPitney Bowestony biancoebe nrụọrụ weebụ